“सके गर्नु, नसके मर्नु” | चितवन पोष्ट दैनिक
“सके गर्नु, नसके मर्नु”
२०७० माघ १६, बिहीबार ०२:५५ गते
“सके गर्नु, नसके मर्नु” भन्ने उखान नेपालीले मात्रै प्रयोग गर्दैनन् । यो उखान विश्वभरि चलनमा छ । यो उखान त्यो बेला प्रयोगमा ल्याइन्छ, जतिबेला मान्छे वा मान्छेहरुको समूहले गर्नैपर्ने खालको काम नगरीकन बस्छन् र गर्न, गराउनका लागि प्रोत्साहन दिनका लागि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । यतिबेला यही उखान नेपाली जनताले नगरी नहुने काम, त्यसमाथि पनि खासगरी चितौने जनताले नगरी नहुने काम टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको हुँदा यिनलाई घचघच्याउन प्रयोग गर्न लागिएको छ, ताकि यिनलाई चाँडोभन्दा चाँडो शुभ कर्म गर्नका लागि जाँगर चलोस् ।
दुनियाँलाई थाहा छ, बीपी मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल जाँगरिला जनता भएको देश जनवादी गणतन्त्र चीनले नेपाली जनतालाई झन्डै बीस वर्षअघि उपहारस्वरुप चितवनको भरतपुरमा निर्माण गरिदियो । त्यतिबेला यस्तो मह¤वपूर्ण अस्पताल निर्माण गरिदिने चीन सरकार र त्यस देशका जनतालाई यो देशका जनताले हृदयदेखि धन्यवाद दिए । हुन त, हाम्रो अर्को छिमेकी भारतले पनि नेपाललाई धेरै थोक उपहार दिएको छ । स्कुल, बाटोघाटो, पुल, अस्पताल, यातायातको साधनलगायत थुप्रै चीज उपहार दिएको छ । नेपाली जनताले भारतलाई पनि धन्यवाद दिएका छन् । तर जहाँसम्म सवाल चीनले नेपाललाई दिएको क्यान्सर अस्पताल छ, यो अति संवेदनशील र मह¤वपूर्ण मानिएको छ, हरेक दृष्टिकोणले । यो अस्पतालमा विश्वमा यतिबेला प्रयोगमा ल्याइएको अत्याधुनिक मेसिनहरु जडान गरिएको छ, जुन मेसिनहरु संसारका धेरै मुलुकहरुमा छैन । क्यान्सर रोगको निदान र उपचारमा यस्ता अत्याधुनिक मेसिनहरुको प्रयोग गरिएको छ, जुन प्रयोगले नेपाली जनताले मात्रै होइन छिमेकी मुलुकका जनताले समेत स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन् ।
क्यान्सर अस्पताल बनेर उपचार प्रारम्भ हुँदा त्यस अस्पतालमा राजनीतिलाई भन्दा मानव सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिने खालका स्वास्थ्य जनशक्तिहरु थिए । तिनले अस्पताललाई एउटा पवित्र मन्दिरकै पाराले अघि बढाए । डा. सुन्दरमणि दीक्षित, डा. सम्पूर्णानन्द ढुंगाना र डा. बालमानसिंह कार्कीका पालासम्म यो क्यान्सर अस्पताल अस्पतालकै पाराले चल्यो । उपचारकर्मीहरुले शतप्रतिशत इमानदारितापूर्वक काम गरे । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम डाक्टरलाई अन्य सरकारी अस्पतालको भन्दा पाँच दोब्बरसम्म तलब सुविधा दिइयो । यसरी पाँच दोब्बरसम्म तलब दिइनुमा एउटा कारण थियो– बाहिर क्लिनिकमा काम गर्न नजाऊन् र बिरामीले सम्पूर्ण सेवा पाउन सकून् । यो उद्देश्य पवित्र
थियो । यही पवित्र उद्देश्यलाई साकार पार्न डाक्टरलाई मात्र होइन, नर्स र अन्य प्राविधिकलगायत जति जनशक्ति अस्पताललाई चहिन्छ, ती सबैलाई आवासको समेत व्यवस्था गरियो । दक्ष जनशक्तिलाई तिनका बालबालिकाको पढाइका कारण अन्यत्र सर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले कुनै बेलाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर कार्कीले अस्पताल परिसरभित्रै स्कूल सञ्चालन गर्ने योजनासमेत बनाएका थिए । उनलाई जालझेल गरेर त्यो काम गर्नबाट वञ्चित गरियो । पूरै राजनीतिक स्थिरता नभए पनि मुलुकमा अस्पताललाई हानि–नोक्सानी नहुने खालको स्थिरता मुलुकमा थियो । राजनीतिक व्यवस्था जुनसुकै होस्, इमानदार मान्छे सधैँ चाहिन्छ ।
तर, जब मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन भयो २०६२ सालको अन्तिममा, तब यो अस्पताललाई साढे सातको दशा त्यही बेलादेखि सुरू भयो । आन्दोलनको समर्थनमा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर र नर्सहरु सेतो एप्रोनमा सडकमा उत्रिए । उत्रिन लगाइयो । पुरानो सत्तालाई पल्टाउन यिनले पनि सहयोग गरे । पुरानो सत्ता पल्टिएपछि त्यही पुरानो सत्ताले भर्ती गरेको इमानदार निर्देशक र केही गरौँ भन्ने भावनाका अध्यक्षलाई तुरून्तै पाखा लगाउने काम भयो । डाक्टरहरुले आन्दोलनलाई सहयोग गरेबापत ब्याज खोजे । ब्याजस्वरुप सेवाको पेसामा काम गरिरहेका डाक्टरलाई प्रशासकका रुपमा शासन गर्ने भोक जाग्यो । परिणामस्वरुप, उपचार गर्ने खुबीका हिसाबले मात्र अति आदरणीय भन्न मिल्ने डाक्टर भक्तमान श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक हुनुभयो । उहाँ राजनीतिक दलको सहयोग र सिफारिसमा कार्यकारी निर्देशक हुनुभएपछि क्यान्सर अस्पतालमा राजनीतिले प्रवेश पायो । चाहिए वा नचाहिए पनि दलीय भागबन्डाको आधारमा कामदार भर्ना गर्न
लागियो । डाक्टर भक्तमानले आफैँ कमिसन खाएर भ्रष्टाचार गर्नुभयो, भएन परमात्मालाई थाहा होला वा नेपालमा परमात्माभन्दा पनि माथि कोही छ भने उसैलाई थाहा होला, तर निर्माण र खरिद कार्यमा ब्रह्मलुट भएको खबर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले चिच्याइचिच्याइ भन्न थाले । ठीकै छ, यो मुलुकमा कहाँनेर भ्रष्टाचार भएको छैन ! कुन सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छैन र यो अस्पतालमा नहोस् ! आर्थिक भ्रष्टाचारलाई वास्ता नगर्दा पनि अस्पताल राम्रैसँग चल्छ र बिरामीले उपचार पाउँछन् भने के फरक पर्ला र ? यस्तै सोची लामो समयसम्म चितौने जनता चुप लागे ।
अस्पतालमा ब्रह्मलुट मच्चाउनेहरुलाई लाग्दो हो, चितवनका जनतालाई लुटबारे केही थाहा छैन । थाहा छ जनतालाई सबै थाहा छ, तर अस्पतालको उपचार प्रक्रियामा अप्ठ्यारो परिपो हाल्छ कि ? यही सोचेर लामो समय जनता चुप बसे । जनताको यही कमजोरी थाहा पाएर भ्रष्टाचारी र अत्याचारीहरुले यतिसम्म अत्याचार गरे कि अस्पतालको हाडछाला मात्रै बाँकी राखेर लुटे । नलुट्नेलाई लुटेरा भन्दा पापै लाग्छ । क्यान्सर अस्पतालमा काम गर्नेहरु सबै लुटेरा होइनन् । ज–जसले लुटेका छन्, तिनलाई मात्रै यहाँ लुटेराको संज्ञा दिइएको छ । अलिअलि इमानदार मान्छे नेपालमा जहाँ पनि पाइन्छ । यस अस्पतालमा पनि इमानदार मान्छे बेस्सरी मेहनत गरेर खोज्दा नपाइने कुरा छैन । सबैभन्दा ठूलो अपराध श्रद्धेय डाक्टर भक्तमानबाट भयो । उहाँले क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई तलब र भत्ता नपुगेको हो भने महिनाको ५ लाख तलब माग गरिदिनुभएको भए हुन्थ्यो । त्यतिले पनि नपुग्ने हो भने प्रत्येक डाक्टरलाई मासिक १० लाख दिने बन्दोबस्त गरिदिनुभएको भए गज्जब राम्रो हुन्थ्यो । तर, उहाँले यसको सट्टा डाक्टरहरुलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न छूट दिनुभयो । आफैँ क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाली हुँदाहुँदै निजी अस्पतालमा काम गर्न जानुभयो । घरमूलीले बाटो बिराएपछि अरुलाई बाटो बिराउन सजिलो हुन्छ । डाक्टर भक्तमानले कर्तव्यलाई लात्तो हिर्काएपछि अन्य चिकित्सकहरु पनि निजी अस्पतालतिर हान्निए । तिनको अवस्था देखेपछि अरु बाँकीहरु पनि म पो के कम भन्नतिर लागे ।
यसरी जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि बिग्रिँदै गएको क्यान्सर अस्पताल सम्हाल्न आएका बिचरा सोझा डा. लक्ष्मीनारायण सिंहले थेग्न सक्ने कुरै थिएन । यिनले थेग्न सकेनन् । मेसिनहरु बिग्रिए । बनाउन खर्च छैन । निर्देशक लक्ष्मीनारायणले खर्च जुटाउन
सक्ने कुरै थिएन, सकेनन् । एम्बुलेन्स बिग्रियो । बन्ने चाँजोपाँजो छैन । एम्बुलेन्सका चालकहरु तलब मात्रै हात थाप्छन् । एम्बुलेन्स चलाउन पर्दैन । सिटी–स्क्यान मेसिनदेखि लिएर मह¤वपूर्ण मेसिनहरु प्रयोगमा आउनै मुस्किल हुने किसिमले बिगारिएको छ । मर्मतको अत्तोपत्तोे छैन । गरिब बिरामीहरु महँगो निजी अस्पतालमा रगत र पसिनाद्वारा संकलित रकम तिर्न बाध्य भएका छन् । जे–जस्तो तरिकाले बिरामीले सेवा पाउनुपथ्र्यो, त्यस्तो छैन यतिबेला यस अस्पतालमा । बिस्तारै–बिस्तारै अनियमितता यसरी बढ्दै छ, कमिसन र दलालीको चक्करले यो अस्पतालमा अहिले बाँकी रहेको उपचार सेवासमेत कुन दिनदेखि बन्द हुने हो, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन । क्यान्सर अस्पताल थचक्कै थला पर्न लागेको देशभरिका जनताले मात्रै होइन, विश्वभरिका मानवले थाहा पाइसके । उपहार दिने चिनियाँ जनतासमेतले नेपालतिर फर्केर क्यान्सर अस्पतालको बिजोग हेरिसके र चुकचुकाइसके ।
तर जहाँसम्म सवाल चितौने जनताको छ, यिनीहरु तात्न र क्यान्सर अस्पताललाई बन्द हुनबाट जोगाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न हतारिनु पथ्र्यो, हतारिएका छैनन् । एक जना क्यान्सर सेवा समाजका अध्यक्ष श्यामप्रसाद लामिछानेले “अस्पताल जोगाउन सकिएला जस्तो छैन” भन्ने अभिव्यक्तिका साथ अस्पतालका दुश्मनहरुको विरोधमा बोलेको देखियो, सुनियो । यसका अतिरिक्त कसैले यस जटिल मामलामा आजसम्म बोलेका छैनन् । चितवनमा नेपाली कांग्रेस पार्टी छ, जिउँदै छ । यो पार्टी जिउँदो भएको प्रमाणस्वरुप यसले दोस्रो पटक सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा सुशील कोइराला र शेषनाथ अधिकारीलाई यही जिल्लाबाट जिताएको छ । ठूलो संख्यामा जिल्ला कार्यसमिति छ र यसको नेतृत्व पुराना राजनीतिज्ञ टेकप्रसाद गुरूङले गरिरहेका छन् । एमाले छ यही जिल्लामा र जे. एन. थपलियाले यसको कमान्ड सम्हालेका छन् । कृष्णभक्त पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई जिताएर यसले पनि आफ्नो उपस्थिति दह्रो देखाएको छ । अर्थात्, एमाले पनि जिउँदै छ । सिट जित्न नसके पनि एमाओवादीको राजनीतिक हैसियत कमजोर छैन । अविनाशले यो पार्टीको नेतृत्व गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विक्रम पाण्डेलार्ई क्षेत्र नम्बर पाँचबाट जितायो । जिउँदो मात्रै होइन, अब त यो पार्टीलाई चितवनमा हरिलो–भरिलो छ पनि भन्नुपर्ने
हुन्छ । जिउँदो मात्रै होइन, नेकपा–माओवादी क्रियाशील छ । यतिबेलासम्म देशलाई मायाममता गर्र्दै आफ्नै खालको राजनीतिक गतिविधिलाई अघि बढाइरहेको छ । अन्य राजनीतिक दलहरु पनि क्रियाशील छन् । नागरिक समाज क्रियाशील नभए पनि मान्छेहरु जिउँदै छन् । केदार मल्लहरु यताउता हिँडिरहेकै छन् । कृष्णपुर र यज्ञपुरीका बासिन्दाहरु जो क्यान्सर अस्पतालको पर्खालसँगै टाँसिएका छन्, तिनीहरुले पनि खाएकै छन् र लाएकै छन् तर क्यान्सर अस्पतालको बिजोग हेरेर बसिरहेका छन् । यिनीहरु टोलाइरहेका छन् । यी सबै जीवित मान्छेहरु हुन् । जीवित मान्छे त्यसै बस्दैन, केही न केही गरिरहन्छ । अब यिनले पनि गर्नुपर्छ । केही न केही गर्नुपर्छ । त्यो केही न केही भनेको हस्तक्षेप हो । डुब्न लागेको क्यान्सर अस्पताललाई उतार्नका लागि हस्तक्षेप । त्यस्तो हस्तक्षेप जुन हस्तक्षेपले क्यान्सर अस्पताल ठीक ढंगले चलोस् । भ्रष्टाचार हटोस् । अनियमितता
हटोस् । मेसिन र एम्बुलेन्स मर्मत होऊन् । एक डाक्टरको तलब कति चाहिन्छ, दसै लाख किन नहोस् ! उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि हस्तक्षेप होस् । निर्देशक डाक्टर होस्, त्यो पनि क्यान्सर अस्पतालको होइन, बाहिरको । अध्यक्ष समाजसेवीमध्येबाट छानियोस् । यसका लागि ऐन परिवर्तन जरूरी भए परिवर्तनका लागि समेत पहलकदमी होस् । कुल मिलाएर अस्पताललाई प्रेतात्माहरुको चंगुलबाट बाहिर निकालेर पहिलेकै अवस्थामा पु¥याउने खालको हस्तक्षेप होस्, हुनुपर्छ ।
एक लाख मुर्दाहरुभन्दा एक हजार जीवित मान्छे काम लाग्छ । ९ सय निदाएको मान्छेभन्दा तीन जना ननिदाएको मान्छे काम लाग्छ । चितवनमा एक प्रकारले निदाएका मान्छेको संख्या ६ लाख छ । क्यान्सर अस्पताल बचाउन कति ब्युँझिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । क्यान्सर अस्पताल बचाउन केही गर्छन् भने यिनलाई बाँचेको भन्नुपर्छ, होइन भने मरे वा सोसरह नै भन्न उपयुक्त हुन्छ । तीतो पचाउन सक्ने हिम्मत हुनेहरुको हकमा चाहिँ यति पनि सकिन्छ– “क्यान्सर अस्पताल बचाउन सक्छौ भने केही गर, सक्दैनौ भने मर ।